Iwo emukati mapuroteni anonakidza enguva dzese ari kutengeswa nhasi paAmazon - bgr - teles
Kuwana Xbox Series X? Tenga mitambo iyi pamutengo wakaderedzwa ...
Chinhu chikuru pamusoro pemakadhi echikwereti aya ndechekuti iwe ...
Fire TV Yakanamira 4K yakadonha kusvika pamadhora makumi matatu nemashanu, asi yakavanzika yeAmazon kutengesa…
Zvinosekesa kuti munhu wese anofunga sei kuti puroteni yavo yekusarudza ndiyo yakanakisa protein bar yekuravira. Zvakanaka, ini ndinogona kukuvimbisa izvi: kana iwe uri pakati pevazhinji vanotenda izvi, iwe unongori chete kana yako protein protein yekusarudzo iri iyo Bhambi yeGamba yeBase. Kutendeseka, iko kupenga chete kuti ivo vanonaka sei.
Inoda Hero mapuroteni maparati anoshandisa allulose sosi inotapira uye kuravira senge shuga. Asi haina kugadzirwa nemuviri wako, saka haina kana imwe yemakorori aunowana kubva mune shuga. Funga nezvazvo - in kuravira zvakafanana sekunge kuti izere neshuga chaiyo, asi haina imwe yeyakaipisisa yeshuga!
Kune matatu akasiyana makara uye ose anonaka, asi wandinodisisa ndiye Kuda Nutrition Gamba Chokoreti Protein Bar. Mabhokisi ezvikamu gumi parizvino anodhura $ 10 paAmazon, uye iwe unogona kuchengetedza makumi matatu muzana pane rimwe bhokisi kana iwe uchitenga maviri. ari Kutsvaga Nutrition Blueberry Cobbler Hero Protein Bar iri repiri senge kwandiri uyezve kechitatu kunaka Vanilla caramel, iyo inodzika kusvika $ 15,46 kwebhokisi remakumi gumi.
Kuda Nutrition Chocolate Hero Protein Bar
Kutengeswa mu1 pack. Pakeki imwe neimwe ine gumi mabara (10 oz imwe neimwe), yehuremu uremu 2,12 oz / 21,2 lb
Yakapfava, fluffy musimboti ine gooey denderedzwa re caramel flavor mukati meiyo chena chokoreti coating
15g protein, 4g net macarbohydrate, 1g shuga, 11g yekudya fiber, 190 macalorie, 9g mafuta
Yakatapira neryryritol, sucralose uye allulose
Pasina gluten-ine zvinwiwa
Kutsvaga Nutrition Blueberry Cobbler Hero Protein bar
Kutengeswa mu1 pack. Pakeki imwe neimwe ine gumi gumi (10 oz imwe neimwe), yehuremu huremu 2,12 oz / 21,2 lb.
Yakapfava, fluffy musimboti neyakaomerera peblueeberry flavour mukati meiyo chena chokoreti coating.
17 g mapuroteni, 3 g netabhoidrate, 1 g shuga, 10 g yekudya fiber, 170 macalori, 7 g mafuta.
Yakatapira neryryritol, sucralose uye allulose.
Hapana zvisanganiswa zvine gluten.
Kuda Nutrition Vanilla Caramel Hero Protein Bar
Nyoro, fluffy musimboti neGooey denderedzwa re caramel flavor mukati meiyo chena chokoreti coating.
16 g protein, 4 g netb makabhaidhihidhi, 1 g shuga, 10 g yekudya fiber, 180 calories, 8 g mafuta
tevera @Bkuueals pa Twitter kuti uenderane neazvino uye makuru mabvumirano atinowana pawebhu. Mitengo iri pasi pekuchinja isina kucherechedzwa uye ma coupons ataurwa pamusoro anogona kuwanikwa mune mashoma huwandu. BGR inogona kugamuchira komisheni pane mirau yakaiswa kuburikidza nechino chinyorwa, uye mutengesi anogona kugamuchira imwe yakavimbika data nekuda kwe accounting zvinangwa.
TELES RELAY 25551 Posts 0 mashoko
Mutambi weCamerooni akabayiwa neakaimbwa mukomana kuBelgium
Kuwana Xbox Series X? Tenga mitambo iyi yakaderedzwa izvozvi uye ivo…
Chinhu chikuru pamusoro pemakadhi echikwereti aya ndechekuti iwe unogona kuwana kubva ...
Fire TV Yakanamira 4K yadonha kusvika pamadhora makumi matatu nemashanu, asi kutengeswa kwakavanzika kweAmazon kunochengetedza zvimwe…
Iwe hautendi kuti yakaderera sei mutengo weAmazon pane yakasviba ...